Izay no anton’ilay fifaneken’ireo antoko politika 100 mahery mivondrona ao anatin’ny hetsika fanorenana ifotony na HFI natao tetsy amin’ny Colbert Antaninarenina iny. Zavatra miisa 2 no mila apetraka mialoha ny ametrahana zavatra hafa dia ny fampihavanana sy fanarenam-pirenena. Apetrao ny fanontaniana! Inona no tombony ho entin’io governemanta vaovao io ho an’ireo nitolona teny an-dalambe? Tsy maintsy ataonao izay hahatongavana any amin’ny fanorenana ifotony na inon-kidona na inon-kihatra ary mila lalàm-panorenana vaovao isika hahatongavana amin’izany. Ho hitanareo eo, hoy hatrany izy, fa itarinay any amin’ny sendika sy fiarahamonim-pirenena io.